“ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားနေသော်လည်း ပညာရေးကောလိပ် ဒုတိယနှစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်” - EDC
“ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားနေသော်လည်း ပညာရေးကောလိပ် ဒုတိယနှစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်”
ဆရာများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များကို ထောက်ခံအတည်ပြုခြင်း ၂၁ ရာစု ဥူးယာဉျမှူးတို့ ဖူးပှင့ျရာ "Supporting Teachers in back-to-school efforts" Guidance for policy-makers "TCSF အကြောင်း သိကောင်းစရာ" ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေသော်လည်း CPD မူဘောင်အကောင်အထည်ဖော်ရေး မူကြမ်းအတည်ပြုအစည်းအဝေးများ အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်
Posted on 2020-04-11 in News
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ဆရာအတတ်သင်ပညာရေးမှ ဦးစီး၍၊ ယူနက်စကို STEM အဖွဲ့နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြစုရေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆရာလမ်းညွှန်နှင့် ကျောင်းသားကိုင်စာအုပ်များကို ပြုစုရေးသားသော ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပညာရှင်များနှင့်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမူကြမ်းကို ပြန်လည်စိစစ်သူများသည်၊ ပညာရေးကောလိပ် ဒုတိယနှစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ နောက်ဆုံးမူကြမ်းကို၊ အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးများဖြင့်၊ ပြန်လည်စိစ်ဆွေးနွေးနေကြကြောင်းသိရသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာလအတွင်း၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းမရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အစည်းအဝေးတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြုစုရေးအဖွဲ့ဝင်များ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး၊ ပညာရေးကောလိပ် ဒုတိယနှစ်အတွက် ဆရာလမ်းညွှန်နှင့် ကျောင်းသားကိုင်စာအုပ်များ၏ နောက်ဆုံးမူကြမ်းအတွက် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ကိုရိုနာရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် ယခင်ကာလများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဗီဒီယိုအစည်းများဖြင့် အတူတကွလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေအသစ်နှင့်အတူ၊ ဒုတိယနှစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းနှင့် အပြီးသတ်ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းများ အစီအစဉ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြုစုရေးအဖွဲ့ဝင်များက ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူနေကြကြောင်း သိရသည်။ အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးမှုများကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြမည်ဟုသိရသည်။
လေးနှစ်သင် ဆရာအတတ်သင် ပညာရေးအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကစတင်ခဲ့ပြီး၊ ပထမနှစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ ပညာရေးကောလိပ် စုစုပေါင်း ၂၅ကျောင်းတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည်။
"Year2Education College Curriculum Development continues in the midst of COVID-19"
Led by DHE teacher education and training section, UNESCO STEM held teleconferencing meetings from 30 March to3April with curriculum core team members and curriculum authors and reviewers to discuss and review the latest draft Year2Education College curriculum. This teleconferencing allowed the continued curriculum development process in the midst of COVID-19.
In the meeting, curriculum core team members actively participated and provided input on improving the latest draft Year2Education College student teacher textbooks and teacher educator guides. Curriculum core team members welcomed this new modality of working together, ensuring that the revision and finalization of Year2curriculum can move forward as planned. The members will continue to provide feedback online.
The new four-year teacher education programme started in December 2019 and the Year 1 curriculum is being implemented in 25 education colleges across the country.